तपाई नयाँ कार किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मूल्यमा मात्र होइन, यी कुरामा दिनुस् ध्यान | HimalDarpan
तपाई नयाँ कार किन्ने सोचमा हुन सक्नुहुन्छ । यो अवस्थामा कारको मूल्यमा तपाईले बढी ध्यान दिनुभएको हुन सक्छ । त्यसपछि फिचरको कुरा होला । यो भन्दा बाहेक अरु कुरातिर पनि ध्यान दिनुभएको छ कि ?
धेरैले यो भन्दा बढी ध्यान दिएको पाइदैन । शोरुममा पनि सबैभन्दा पहिले यी कुराकै बारेमा बढी छलफल हुन्छ । कार खरिदको समयमा शोरूमले ग्राहकलाई कारको मोडल, मूल्य, सुुविधा र माइलेज आदिको बारेमा सबै जानकारी दिएका हुन्छन् । यद्यपि डिलरशिपले आफ्नो फाइदाको लागि सबै जानकारीहरू ग्राहकहरूसँग भनेका हुँदैनन् ।
कारको मूल्यमा प्रायः कम्पनीहरुले छुट उपलब्ध गराएका हुन्छन् । त्यसैगरी कार किन्दा यसको साथमा कुन कुन अन्य सुविधा उपलब्ध हुन्छन् भन्ने वारेमा पनि जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
फेस्टिभ सिजनको साथै अन्य समयमा पनि कम्पनीले कारको मूल्यमा छुट दिएको हुन्छ । यसमा नगद छुट, एक्सटेन्डेड वारेन्टी, सर्भिसिङ वा एसेसरिज जस्ता लाभहरू समावेश रहेको छ । यद्यपि कहिलेकाँही कम्पनीहरूले यी आवश्यक विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैनन् भने डिलरशिपले यसको जानकारी ग्राहकलाई दिएको हुँदैन जसले गर्दा ग्राहकहरूले नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले समग्र पक्षको वारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ ।
कुनै पनि कम्पनीले फिक्स मुल्यमा कार बिक्री गरेको हुँदैन । यसको लागि डिलरशिपसँग छुटको कुरा गर्न सकिन्छ । कारको मूल्य अनुसार सामान्यतः ५० हजार देखि बढी नै छुट हुन सक्छ । यसको वारेमा राम्रोसँग बुझेर छलफलका आधारमा छुट उपलब्ध हुन सक्छ ।
कार किनेर मात्र हुँदैन । यसमा प्रयोग गरिने एसेसरिज पनि उत्तिकै महंगो हुन्छ । त्यसैले कार किनेपछि एसेसरिजका लागि कति थप पैसा लाग्छ वा कम्पनीले नै कति एसेसरिज निःशुल्क उपलब्ध गराउछ भन्ने वारेमा थाहा हुनुपर्छ । कतिपय शोरुमले कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको निःशुृल्क एसेसरिज उपलब्ध नगराउन पनि सक्छन् । यस्ता एसेसरिजको मूल्य समेत लाखौ रुपैयाँ हुन सक्छ । त्यसैले यी सबैको वारेमा जानकारी हुन सक्छ ।
कार किनेर मात्र हुँदैन, त्यसपछि कम्पनीले दिने वारेन्टी र अन्य पक्षको वारेमा समेत जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । कुन कम्पनीको कार किन्दा कति वारेन्टी छ र कुन कुन स्थानमा सर्भिस सेन्टर छ भन्ने वारेमा थाहा हुनु आवश्यक हुन्छ । यसो भयो भने लामो समय सम्म सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कार किनेर मात्र हुँदैन, फेरि बेचेर अर्को किन्न पनि सकिन्छ । यो अवस्थामा रिसेल भ्याल्यु राम्रो हुनुपर्छ । यसले गर्दा रिसेल भ्याल्यु कुन कम्पनीको राम्रो छ भन्ने वारेमा पनि थाहा हुनु पर्छ ।
कतिपय अवस्थामा ब्रान्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछि बेच्‍नका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्टाटस सिम्बोलका लागि कार किन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । यो अवस्थामा कुन ब्रान्डको कार प्रयोग गर्दा आफ्नो स्टाटस सिम्बोल झल्किन्छ भन्ने वारेमा जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यही अनुसारको ब्रान्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
झण्डै ६ वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा करिम बेन्जिमा
मिड रेन्जको सर्फेस ल्याप्टप ल्याउदै माइक्रोसफ्ट…